Imveliso yeTekhnoloji ye-Hi-Tech kunye nezixhobo zovavanyo
Imveliso yeCasing Production
Imigca yokuvelisa iikhoyili
Ukujonga ukuKhangela kweMpazamo
Auto-iwelding Tube kunye Plate
I-SPL ivelise abatshintshi bobushushu kangangeminyaka engama-20. Sinophando lwangaphakathi endlwini kunye nokukwazi ukukhula, kunye nenqanaba loshishino eliqhubekekayo ekusebenzeni, unyango lobushushu, ukuvelisa, ukuvavanywa komzimba kunye nokuvavanywa kwemichiza, ubuchule bolawulo lomgangatho.
Uvavanyo lweMveliso ezigqityiweyo
Sisekele amaqonga ovavanyo lwenqaba yokupholisa ngaphakathi, eneentlobo ezahlukeneyo zetyhubhu eShanghai. Ngokusebenzisana neYunivesithi yase-China yeYunivesithi yezeNzululwazi neTekhnoloji, senza intsebenziswano kwishishini ukusebenzisa eyona ithiyori iphambili yesayensi zombini iimveliso zasekhaya kunye nokuthumela iimveliso zenkampani. Siyaqhubeka ukukhokela imeko yentengiso ngezixhobo ezilungileyo, itekhnoloji yakutshanje. Sithathe inxaxheba kuyilo lwesithandathu lomgangatho wasekhaya wase-Shanghai kunye nomgangatho omnye kumzi mveliso.
Sakha iintlobo ezahlukeneyo zeqonga lovavanyo lwe-evaporative condensers, ukuqinisekisa umgangatho ophezulu kunye nokusebenza okuphezulu kwemveliso ephumayo.
Sizinikezele ekwakheni amashishini okuqala, enza iimveliso zodidi lokuqala. I-CTI (iZiko lobuGcisa beTekhnoloji) evela e-USA iqinisekisa iiTowering Towers zethu minyaka le, ukusebenza kwemveliso kunye neNkonzo yoMgangatho isenza ukuba sibe ngumenzi ophambili eTshayina.
Amandla e-R & D aMandla
Siphumelele ngempumelelo indibaniselwano yokuqala yomoya opholileyo weprojekthi ye-poly-silicon ebekwe kwindawo eyomileyo ethambekele kwiinkqwithela zase China ezibonelela ngamanzi kunye noGcino lwamandla. Uyilo olukhethekileyo lokungenisa umoya luyakuthintela isanti kunye nothuli kwizixhobo ezinomoya, ikwanciphisa kakhulu ukulahleka kwamanzi. Umtshintshi ogcweleyo wokuguqula, ufikelela kulawulo lobushushu obuhle, kunye nokugcina amandla. Ukuqiniswa kwesakhiwo sezixhobo, ixesha elinye lotyalo-mali, ubomi obude, inkqubo yokuhambisa amanzi evaliweyo ngesixhobo senzululwazi sokutshiza, ngcono ekongeni amanzi.
Iprojekthi yokuqala yokupholisa i-evaporative yase China e-CNOOC.
Iprojekthi yokuqala yokubuyisela kwisityalo se-China sulphur dioxide e-West Mining.
Iprojekthi yezityalo yaseTshayina yokuqala yeEthyl acetate kwiXinfu Bio.
Amalungu akumgangatho ophezulu
Udonga oluphezulu lweGalum
Iqokobhe lenziwe ngeplate ephezulu ye-Aluzinc enokumelana ngokuqinileyo kunye nokuqina okungamaxesha ama-3-6 ngaphezulu kwalawo eepleyiti zeAluzinc eziqhelekileyo. Amacwecwe anokumelana ngokuqinileyo kwe-thermal, kunye ne-aesthetic ngembonakalo.
• Iipesenti ezingama-55 zeAluminiyam- Uluncedo: Ukumelana nobushushu, ixesha elide lokuphila.
• I-43.4% yeZinc—— Isibonelelo: Ukunganyangeki kwebala.
• I-1,6% ye-Silicon — Isibonelelo: Ukuxhathisa kobushushu.
ISuper Galum ligama lophawu lwentsimbi engama-55% ye-aluminium-zinc. I-Super Galum bubushushu obuninzi kunye nokumelana nokubola, ukudibanisa iipropathi zealuminium ezinikezela ukomelela okuzinzileyo, ukumelana nobushushu okugqwesileyo, ukubanzima, kunye nezo zinc ezinikezela ubushushu obuphezulu kunye nokukhuseleka okuhle. ISuper Galum inezinto eziphindwe kathathu ukuya kwisithandathu ngaphezulu zokumelana nokubola kunesinci esiqhelekileyo esinexabiso le-zinc.
I-coil zokujija ezikhethekileyo ze-SPL zenziwe nge-tubing yentsimbi ekumgangatho ophezulu kulandela ezona nkqubo zingqongqo zolawulo lomgangatho. Isekethe nganye iyahlolwa ukuqinisekisa umgangatho ophakamileyo wezinto eziphathekayo.
Zonke iikhoyili ze-SPL zenziwa kwisiqwenga esinye esiqhubekayo sisebenzisa umgca wemveliso yekhoyili ozenzekelayo, le nkqubo icutha umda we-welding slag, yonyusa ukusebenza kwemveliso kunye namaxesha akhokelela kumzi-mveliso.
Iikhoyili zivavanywa ngesanti hydrostatic atleast ka-3 ngexesha lokuvelisa nge-2.5MPa uxinzelelo lokuqinisekisa ukuba azivuzi simahla.
Ukukhusela iikhoyili ngokuchasene nokubola, iikhoyili zibekwa kwisakhelo esinzima sentsimbi emva koko indibano iphelele ifakwe kwizinki ezityhidiweyo (idiphu eshushu eshushu) kwisithuba se-427oC, iityhubhu zibekwa kwicala lokuhamba kolwelo ukubonelela kakuhle umsele wamanzi.
Iikhoyili eziqhelekileyo ze-SPL zibonelela ngokusebenza ngokukuko kotshintsho lobushushu ngetekhnoloji yekhoyili kunye nokuzalisa indibaniselwano ukunqanda indawo eyomileyo kunye nokungcola okwenziwa kwiikhoyili.
Iikhabhathi ze-BTC zisebenzisa i-dichromat bolt yokuxhuma, i-inoxidability igqibelele ngakumbi kuneebholtshi eziqhelekileyo, ngeli xesha iqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo okupholileyo ixesha elide.
Ifeni ye-axial yemigca ye-SPL isebenzisa iicarbon fiber blade ngaphambili fan egosogoso, oku kubonelela, ivolumu yomoya ephezulu, ingxolo ephantsi, ukusebenza ngokugqibeleleyo ngokusebenza kakuhle.
Umenzi wokutshiza ngomenzi
Ulondolozo olukhethekileyo lwamalungelo obunini lwe-SPL alusasebenzi ngaphandle kwemvume ngelixa lubonelela nangokusasazwa kwamanzi ngokuthe rhoqo, okupholisa ukungabikho komphunga phantsi kwazo zonke iimeko zokusebenza. Ngapha koko, imibhobho ibekwe kwimibhobho yokuhambisa amanzi engenamhlwa kwaye inomsonto wokugqibela.
Ngokudibeneyo, ezi zinto zidibeneyo zibonelela ngokugubungela i-coil engalinganiyo kunye nokuthintela isikali, nto leyo ebenza ukuba benze eyona mveliso ingahambelaniyo nenkqubo yokuhambisa amanzi ngaphandle kokugcina.
Impompo ejikeleza amanzi
Ukusebenza okuphezulu kweNokia ukuqhuba iimoto, ukuhamba okuphezulu kunye nengxolo ephantsi. Isebenzisa ukungabikho kokuqhuba kuthintelwe uphawu oluphezulu lomatshini, ukuvuza ngokukhululekileyo kunye nobomi obude.
Ukucocwa ngombane nge-elektroniki
Isicoci sokucoca elektroniki sinikezela nge-98% yokwanda kokusebenza ngaphezulu kokuthintela umlinganiso wamanzi kwaye ngaphezulu kwama-95% kwandise inzalo kunye nokususwa kwe-algae ngaphezulu kwetekhnoloji ye-elektroniki ephezulu. Yenzelwe ngokukodwa iinqaba zokupholisa i-loop ezivaliweyo kunye nee-condensers ezisebenzisa amandla asezantsi.
Uhlobo lweCompact yobusi bePVC
SPL®Gcwalisa uyilo olusetyenziswe kwimigca ye-S evaporative condenser kunye nenqaba yokupholisa yenzelwe ngokukodwa ukudibanisa ukuxubana komoya kunye namanzi kugqithiso lobushushu. Iingcebiso ezikhethekileyo zokuhambisa amanzi zivumela ukulayishwa okuphezulu kwamanzi ngaphandle koxinzelelo olugqithisileyo. Ukugcwaliswa kwakhiwe nge-inert polyvinyl chloride, (PVC). Ayizukubola okanye ibole kwaye yenzelwe ukumelana namaqondo obushushu bamanzi angama-54.4ºC. Ngenxa yecandelo elikhethekileyo lomnqamlezo wobusi obunqamlezileyo apho amaphepha anqamlezileyo adityaniswe kunye, kunye nenkxaso esezantsi yecandelo lokugcwalisa, ukuthembeka kwesakhiwo sokugcwalisa kuyaphuculwa kakhulu, kwenza ukuzaliswa kusetyenziswe njengeqonga lokusebenza. Ukuzaliswa okukhethiweyo kwi-Condenser kunye neNqaba yokuPholisa kuneempawu ezintle zokumelana nomlilo.
Uhlobo lwenyosi ye-PVC yokugaya ubusi kunye noyilo olufutshane lokungenisa umoya olunokuthi luqinisekise ukufakwa kobushushu ngumoya opholileyo kwangoko.
Ilungelo lokushicilela elinokuchithwa elinelungelo elilodwa lomenzi
I-SPL's detachable drift elimator yenziwe nge-polyvinyl chloride (PVC) eyenzelwe ngokukodwa, ishenxisi esinelungelo elilodwa lomenzi sithobela i-AS / NZS 3666.1: 20116 ngelahleko ephezulu yokulahleka kwe-0.001%.
Izinto ezinokuphelisa ziyilelwe ukulondolozwa okwenza ukuba kube lula kakhulu ukuzicoca.
Umthambeka Basin ngoCoceko olulula
Ithambeka lesitya esisezantsi sokukhupha umbhobho sinokucoca ilindle kunye nokungahlambuluki ngokufanelekileyo
Igunya lokungena kuMoya elinelungelo elilodwa lomenzi
Ngabo bapasi babini inkqubo,Amaconsi amanzi afakwa kwipasile yangaphakathi ethambekisayo, ukunciphisa iingxaki zokuphuma. Uyilo olwahlukileyo lwe-SPL lazo zonke ii-SPL's N imigca evale ngokupheleleyo indawo yeebheseni. Ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo kuthintelwe emanzini ngaphakathi kwi-condenser kunye nenqaba yokupholisa, ngaloo ndlela kuncitshiswa ukubakho kwe-algae. Ukucocwa kwamanzi kunye nokugcinwa kwexabiso kuncitshiswe kakhulu. Ngelixa liqukethe ngokufanelekileyo amanzi ajikelezayo kunye nokuthintela ukukhanya kwelanga, uyilo lwe-louver lunokwehla koxinzelelo olusezantsi. Ukuhla koxinzelelo olusezantsi kubangela ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, okunciphisa iindleko zokusebenza kwinqaba yokupholisa.
Ikhoyili yeElliptical ePhambili
I-condensers entsha evaporative entsha isebenzisa uyilo lweeoyile zokugqibela zeelliptical eziqinisekisa ukusebenza ngokukuko. Uyilo lwetyhubhu ye-elliptical luvumela ukusondelelana kweshubhu, okukhokelela kumhlaba omkhulu wendawo nganye yesicwangciso kunoyilo lweetyhubhu ezijikelezayo. Ukongeza, uyilo oluguquliweyo lwe-elliptical lusebenzisa itekhnoloji ye-coil ye-elliptical ejikelezayo kwaye inokuchasana okuphantsi kokuhamba komoya kunezoyilo zekhoyili ezigqityiweyo. Oku kuvumela ukulayishwa okukhulu kwamanzi, okwenza i-coil entsha ye-elliptical yeyona coil isebenzayo yoyilo ekhoyo kwintengiso.
Uyilo oludibeneyo lweNdleko zokuThumela ezisezantsi
Iimveliso zothotho lwe-SPL ziyilelwe ukuba zithunyelwe kwifom yekiti elingana nezikhongozeli.
I-OEM kunye ne-ODM yamkelekile
Ubungakanani ngentando kunye neemilo ziyafumaneka. Wamkelekile ukwabelana ngombono wakho nathi, masisebenze kunye ukwenza ubomi bube nokuyila ngakumbi.